Macawiis - Wikipedia
Nin Soomaali xidhan macawiis
Macawiis (; ) sidoo kale loo yaqaano Guntiimo, waa shay dabacsan oo ka samaysan dun, ama cudbi, ama harag kaasi oo la tolay. Macawiistu waxay ka mid tahay dharka ragga inkastoo dumarka laftoodu xidhaan mararka qaar. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta.
Macawiist waxay ka mid tahay dharka joogtada ah ee rag iyo dumarba. Macawiistu waa maro la tolay taasi oo leh qaab le'eg qofka xidhanaya ama isticmaalaya sheygaasi. Macawiistu wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo ka duwan noocyada kale ee dharka. Astaamaha ugu muhiimsan ee shaadhasha waxaa ka mid ah raqabada, jeeb iyo galuusyo (badhano) badan oo laabta ku dhex yaala.
Ereyga Macawiis asal ahaan waa mid Af-Faarisi kaasi oo luuqado badan ka soo amaahdeen.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Macawiis&oldid=195320"